Iskripthi sokususa izikhangiso kunoma yisiphi isiphequluli | Kusuka kuLinux
Kwenzeka ukuthi namuhla kunezinkulungwane, amakhulu ezinkulungwane zokukhangisa noma zokukhangisa kwi-intanethi, sithola zonke izinhlobo ... AdSense, ukukhangisa Yahoo, amasayithi angaphazamisi kangako athengisayo okuthunyelwe okuxhasiwe, ukukhangisa esikuthola ku- Facebook y Twitter (empeleni ungafaka ne- ama-tweets axhasiwe kuthengiswa kwamanye amasayithi) ... ngamafuphi, ukuthi i-intanethi ibukelwe phansi yizikhangiso nama-banner abaningi abangenandaba nawo.
Esikhathini esithile esedlule ngikhulume nawe mayelana nokuthi ungavimba kanjani ukukhangisa nge-inthanethi ngokusebenzisa i-terminal yanoma yisiphi isiphequluli (ngaphandle kokusebenzisa ama-plugins), bekubandakanya (ngesandla) ukufaka amasayithi wokukhangisa ku- / njll / amabamba okukhombisa ukuthi zaziku-127.0.0.1, okungukuthi, lapho sivula isayithi isiphequluli sasizoya kobheka isithombe se-Adsense kwikhompyutha yethu, njengoba kusobala ukuthi leso sithombe sasingekho kahle, akukho lutho esaluboniswa.
Ngokusobala lokhu bekunezinzuzo nobubi bazo. Okokuqala, njengoba bekuyincwadi yezandla, besilawula izizinda ebezivinjelwe, kepha futhi, njengoba bekungokwesandla, bekukhona ezinye eziningi, njengoba besingazazi, besingakwazi ukubavimba. Kulesi sihloko ngikulethela iskripthi esibhalwe yimina esizenzela inqubo, okusho ukuthi, ngaso sonke isikhathi X lapho ilanda i-database equkethe amasayithi we-spyware kanye nezokukhangisa bese ingeza lawo masayithi kwabethu / njll / abasingethe, ngale ndlela isiphequluli sisesha ukukhangisa kuseva yewebhu kwikhompyutha yethu ... iseva yewebhu, njengoba ingekho (futhi uma ikhona, azikho izithombe zokukhangisa / amabhanela) kahle, ngeke nje sizibone lezo zikhangiso ezicasulayo.
Noma kunjalo, nazi izinyathelo:
1. Silanda iskripthi bese siyinika izimvume zokwenza:
2. Ngemuva kwalokho, asihlele i- / etc / crontab yethu ukuze iskripthi sisebenze njalo ngenyanga, nge-1 yanyanga zonke ngokwesibonelo, kungabonakala kanjena:
3. Manje kufanele baqale kabusha i-cron daemon yabo noma ikhompyutha, noma ikuphi okunethezekile kubo.
4. Silungile, uma ufuna ungalinda kuze kube usuku 1 noma usebenzise iskripthi ngokwakho (ngamalungelo empande).
Ngishiya okuqukethwe kombhalo lapha, ukukuchaza ngokuningiliziwe:
#! / bin / bash wget http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt -O /tmp/hosts.txt ls /etc/hosts.old &> / dev / null uma [$? -ne 0]; bese i-cp / etc / hosts /etc/hosts.old fi echo "127.0.0.1 localhost.localdomain localhost"> / etc / hosts echo ":: 1 localhost.localdomain localhost" >> / etc / hosts Cat / tmp / hosts. txt >> / etc / hosts rm /tmp/hosts.txt exit
Okokuqala silanda ifayela eliqukethe lonke uhlu lwezizinda zokukhangisa bese silifaka ku / tmp / negama elithi hosts.txt. Ngemuva kwalokho sibheka ukuthi ngabe ifayili le- /etc/hosts.old likhona yini ... uma lingekho kusho ukuthi kungokokuqala sisebenzisa lo mbhalo, lapho sigcina khona (senza ikhophi) lethu / etc / hosts to / njll / hosts.old njengoba kuhle njalo gcina okwangempela. Ngemuva kwalokho sikushintsha konke okuqukethwe okwethu / etc / hosts ngemigqa emibili ejwayelekile, ekhombisa ukuthi i-127.0.0.1 iyi-localhost futhi okuphambene nalokho. Okokugcina ngefayela le-Host, sikopisha konke okuqukethwe kwe /tmp/hosts.txt ku / etc / hosts (ngaphandle kokukhipha eminye imigqa emibili efakiwe), ngale ndlela sesivele sikhombisile ukuthi izizinda zokukhangisa ziku-0.0.0.0 … Wozani, nje sifuna lokho. Ngemuva kwalokho ukuqeda, simane sisuse /tmp/hosts.txt Futhi-ke.
Iskripthi esilula ngokwedlulele, singathuthukiswa kakhulu ngokubheka i-md5 yefayela elilandiwe, kusetshenziswa umyalo ohlukile ukuze kungadingeki ukuthi kwenziwe i- / etc / Sebawzi kusuka ekuqaleni futhi ungeze kuphela izizinda ezintsha kulo, njll . Kepha hheyi, lo ngumqondo nje, inguqulo yokuqala esebenzayo, ekugcineni ngikwenzele lokho, ukuyenza isebenze futhi ihambise inqubo kancane.
Akunalutho, ngiyabonga kusimo, Eduardo nabanye ngemibono namathiphu abo esihlokweni esedlule. Lo mbhalo akuyona into entsha (I-Konozidus ne-csb base bevele bangitshele ngobukhona bokufana) kepha-ke, ngiyathanda ukuhlela imibhalo yami, ngiyayithanda i-bash ... yize kwesinye isikhathi kunezixazululo zenkinga yami, ngincamela ukuzihlelela eyodwa.
Nokho, ngiyethemba ukuthole kuthakazelisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Iskripthi sokususa ukukhangisa kunoma yisiphi isiphequluli
Sawubona, ngiyabonga ngombhalo, ngenza okufanayo kudala, kunemigqa engaphezulu kwe-31.ooo, ngizoyishiya ukuze uyikopishe uma ufuna:
Kuhle kakhulu, futhi okuhamba phambili incazelo yesinyathelo ngasinye sokufunda
umlindi wenyanga kusho
kuyathakazelisa 🙂 yize iqiniso ukuthi phakathi kweNoscript, i-adblock plus neDoNotTrackme nokulungiswa kwami ​​kwe-Iceweasel (awekho amakhekhe, angikhumbuli umlando….) Nginomgoqo ongenakunqobeka wokukhangisa nabanye. 😉
Phendula umlindi wenyanga
Uma ngisebenzisa isiphequluli esisodwa (iFirefox) bekungeke kube nezinkinga, kepha ngisebenzisa eziningana ... Opera, Firefox, Rekonq kanye neChromium, ngidinga 'okuthile' okusebenzela wonke umuntu
Lapho ngithayipha ku-bash / etc / crontab bese nginikeza ukungena, ngithola imvume yenqatshiwe
Kufanele uhlele lelo fayela njengoMsuka noma ngeSudo.
Manje ngemuva kokuthi ngithayiphe i-Sudo / njll / i-crontab icela iphasiwedi yami, ngiyibhala phansi, ngifaka ukungena bese kubonakala Sudo: / etc / crontab: command not found
Guso, uzamile Sudo nano / etc / crontab ???
Njengamanje ngivele ngibeke okushoyo bese ngithola imininingwane eminingi engingazi ukuthi iyini. Bengicabanga ukuthi okufanele kuvele yilokhu okuthunyelwe okushoyo: 00 00 1 * * root /home/user/anti-ads.sh
Hlela ifayela nge:
Ngemuva kwalokho, ekugcineni ungeza umugqa engiwubeke kokuthunyelwe.
Ukuqedela nokungazenzi nzima ngomunye umyalo, qala kabusha i-PC ne-voila, kuzoba isikhathi sokulinda usuku olulandelayo olungu-1.
Ngoba umyalo wokuhlela umbhalo awukho. Mina, ukuthi ngisebenzisa i-Linux Mint nemvelo ye-Mate, isihleli sombhalo ipeni, ngakho-ke lokho ozama kungabonakala kanjena:
ipeni le-sudo / njll / crontab
Ngiyabonga. Yize ibivele ingisebenzele ngeSudo nano / etc / crontab.
yi-crontab -e (ukuhlela) njengezimpande noma ngeSudo kanjena:
Sudo su (iphasiwedi futhi uyizimpande)
Noma i-sudo crontab -e
Isihleli siyi-vim, ucindezela i (it is Latin) okufaka noma ukuhlela, uyanyakaza, uyashintsha, bese ucindezela u-Esc uma usuqedile bese ucindezela u-wq bese ushaya u-enter, lokho kuyirekhodi bese uyaphuma futhi yilokho.
Kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Yize njengoba besho laphaya ngimane nginezandiso nokulungiswa okungisuse kude ekukhangiseni ku-firefox yami.
Isikripthi esihle. Bekufanele ngenze ezinye izinguquko ekugcineni ezihlale zinje:
cp amabamba.txt / tmp /
Yini enye engingayisho, kuhle ukusebenzisa i-linux.
Angazi ukuthi kungani, kepha uma sengihlelile umninikhaya walokho, angibonanga imibono ye-youtube, ngizozama kulokhu ngibone.
Ngokwethembeka, ngiyavuma ukuthi ukukhangisa kusinda kakhulu, kepha ngokungabikho kweminikelo, amabhulogi amaningi (kufaka phakathi awami) awukuphela komthombo wabo wokuthola imali.
Awulimazi izinkampani ezinkulu, kepha ama-blogger amancane, yebo ...
i-linuxero enolwazi oluningi lokhu kungafana nokufunda umculo wephepha lepiyano lomculi
Kupholile futhi kulula. Yini enye ongayifuna?
Inkinga ukuthi asisakwazi ukwethemba i-Adblock Plus kakhulu njengoba kukhokhisa ukuvula ukukhangisa okuningi. Ngakho-ke ukukugculisa ngomthombo ophelele / njll / umphathi sesivele simboziwe.
Namuhla sonke sifuna izindlela zokuthola imali elula, uma kunesidingo sayo kanye nezinkinga zabasebenzi ezweni lethu. Mina, njengani nonke, nami nginale nkinga futhi ngiyaqhubeka nokuhamba esikhaleni esikhulu se-Intanethi, ngifuna lowo msebenzi ohlangabezana nalokho engikulindele, okungukuthi, ukusebenza kancane nokuhola imali eningi. Iqiniso ngukuthi kade ngilandela lokho kufuna isikhathi eside okungangilethela injabulo ephelele (okungenani ngokwezimali), akukho okunye okuqhubekayo kusuka eqinisweni, ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela ngingaqhubeka eminye iminyaka embalwa noma mhlawumbe ngokungapheli. Benginesikhathi ngicwaninga ngezinhlelo zeMultilevel, okusho ukuthi uhlelo ojoyina ngalo inkampani bese wenza imisebenzi ethile okhokhelwa yona, kokunye ukhokhelwa kakhulu. Ukungena, udinga kuphela ilungu lalabo asebevele beyingxenye yale nkampani ekuxhasayo bese uba yingxenye yeqembu labo. Uma usungaphakathi kulo mhlaba wohlelo lweMultilevel System, ungahlela ukwenza imisebenzi oyinikwa nsuku zonke noma wenze lokho okubizwa ngokuthi inethiwekhi, okungukuthi, ukufuna amanye amalungu abe yingxenye yeqembu lakho ngakho-ke enze uhlelo inethiwekhi ebizwa ngokuthi kanambambili noma eqondile, edala izinzuzo eziyinsalela ezingezwe ezinzuzweni ezikunikeza zona ngomsebenzi wakho wansuku zonke.
Kuze kube namuhla, i-YouTube inolwazi oluningi ngale ndaba. Kulawa mavidiyo bakwazisa ngazo zonke izinyathelo zokubhalisela izinkampani ezahlukahlukene ezisebenzisa iMultilevel System nokuthi isebenza kanjani. Ngiphenya enye yazo iLibertaGia, iyinkampani esanda kwenziwa ngokwedatha engikwazile ukuyithola kwinethiwekhi, eyakhiwe kusukela ngo-Okthoba 2013. Ngibhaliswe izinsuku ezintathu futhi okwamanje angikwazi yenza noma yikuphi ukuqagela ngenhlonipho. Umsebenzi wami wansuku zonke engiwenzayo ukuvula amakhasi e-web ayi-10 bese uwabheka umzuzu owodwa lilinye (hhayi kabi eh…), uma kubhekwa ngiyabanika njengokuqinisekisiwe futhi nekhawunta yemali ingitshela ukuthi ngithole ama- $ 3. Ngakho-ke manje sengizuze ama-ayisishiyagalolunye (9) $, cishe ngingenzi lutho. Njengoba besho kwisethulo sabo, kufanele ngiphakamise ama- $ 300 ukuze ngikwazi ukuqala ukwenza leyo mali iphumelele futhi ngikwazi ukuyilahla, sizobona ukuthi kunjalo yini. Okwamanje anginakho okunye engingakwenza ngaphandle kokuqhubeka ngizama ukufinyelela kuleyo mali bese ngilinda ukuthenga iphakethe le-Booster (package ngendlela edingekayo yokuthenga leyo ebiza u- $ 399).
Uma othile efuna ukubamba iqhaza kulolu hlelo lweMultilevel, angasebenzisa isixhumanisi sami ukuba yingxenye yeLibertaGia futhi bazihlole ukuthi ngabe le ndlela yokuphila nokuhola imali iphupho noma iqiniso. Angazi okwamanje, kodwa ngizokutshela isinyathelo ngesinyathelo ukuthi kwenzekani kimi.
Ngicabanga ukuthi une-Blog engalungile, lesi akusona isayithi lokucinga ngokudluliselwa.
Ngokwethembeka, lokhu okushoyo kungumbombayi. Njalo kufanele ukhumbule: akekho onika kanzima ama-pesetas ...
Cabanga u- $ 3.00 ngomzuzu, lokho kungu- $ 180.00 ngehora, lokho akuzwakali kuyinqaba?
Mngani, ngiyakholelwa ukuthi okubhale kule Bhulogi bekungukungazi futhi ngenxa yokuthi impilo inzima kangakanani, ukuphela komuntu ongenza imali kuleyo nkampani umnikazi nabanye babangani abaseduze, zonke lezo zinhlelo zepiramidi zingumbombayi .
Kunezinkampani ezithile iLionbridge neLeapforge, ezisebenza kwaGoogle futhi zikuqasha ukuthi uhlole amakhasi ewebhu, zikukhokhela kusuka ku- $ 12.00 kuye ku- $ 15.00 ngehora, lezi yizinkampani ezibucayi, kufanele uzithumele i-CV yakho, ziyakuhlola futhi uma uyasebenza bayakuqasha.
Cishe lapha bakhulume ngeGoogle Adsense, abanye bethu abayisebenzisa kumaBlog ethu ukuzitholela amaphenathi kodwa ngala mabhulokhi amahle acishe anciphise ku- $ 0.00 hahahaha.
Kepha noma kunjalo, ukwenza imali kwi-Intanethi kuyenzeka, noma uphila ngakho, ngiyakutshela ngokuhlangenwe nakho kwami, lena akuyona indawo yokuxoxa ngayo, kepha qhubeka ubheke, konke kusesimweni sengqondo.
Kubukeka sengathi isikhangiso sihlungiwe esingakwazanga ukuvimba isikripthi d njll / abasingathi…. 😀
kuhle kakhulu, ukusebenza kuyafana ne-adfree ye-android, lapho ngiyifaka ngacabanga: uhlakaniphe kangakanani lo owadala le haha ​​kodwa akukaze kwenzeke kimi ukuthi ngiyisebenzise kuGnu / Linux.
Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi sekuphelile.
Sawubona, esikhashaneni esedlule ngilandele izinyathelo ozichaze kokuthunyelwe kwakho kwangaphambilini futhi zangisebenzela kahle kakhulu, inkinga kwaba ukuthi ngisebenzisa ikhasi elizokukhombisa okuqukethwe okuthile likucela ukuthi uvale ukukhangisa, futhi njengoba kungakwazanga ukukukhombisa kimi kukhombise iphutha ngalokhu. Ingabe ikhona indlela yokukhubaza okwesikhashana ukuvimba noma ukukuvimbela ekuvimbeleni amakhasi athile?
imikhonzo nokubonga ngokwabelana ngalolu lwazi 😀
Ngalokho uyaphawula, ngicabanga izixazululo eziningana, noma ngingazi ukuthi yisiphi esizolingana kahle nenkinga yakho. Isicelo ngasinye sewebhu umhlaba. Konke kuncike kwisimo esithile, ukuthi uzimisele ukukhokha kuzinsizakusebenza zesikhathi nesikhathi nokuzinikela ofuna ukukutshala ngale nkinga.
Isixazululo sokuqala engingacabanga ngaso, mhlawumbe esilula futhi, kungaba ukususa isizinda sesikhangiso esiphikisanayo kufayela le- / etc / hosts. Mhlawumbe ngaphezu kwesixazululo, lokhu kungaba ukuqeda inkinga yezimpande, noma kunjalo futhi ubungeke uvimbe ukukhangisa.
Ungenza futhi iskripthi esisusa / esengeza isizinda sokukhangisa kusuka ku- / etc / hosts. Ngakho-ke lapho udinga ukukhangisa ukuze ufinyeleleke kufanele nje ukusebenze. Ungayenza iphelelwe yisikhathi noma njengoshintshi oguqula izifundazwe ezimbalwa. Ukwenziwa kweskripthi kungaba ngesandla, kepha futhi kungenziwa kube okuzenzakalelayo ukuze kusebenze lapho kutholakala isizinda esithile noma i-URL, kokugcina, kungasetshenziswa uhlelo lommeleli. Kulokhu ngabe asivimbeli ukukhangisa ngokuphelele.
Esinye isixazululo kungaba ukuvula iwindi lamathuluzi wokuthuthukisa iwebhu kusiphequluli. Yenza isicelo ku-URL lapho insiza esifuna ukuyibuka itholakala khona. Bese uhlola impendulo etholakele ukuzama, ngokusebenzisa ukulungiswa kwe-DOM nokwenza ikhodi ye-JS, ukuthi uhlelo lokusebenza luthule isimilo nokuqukethwe esikufunayo. Ngalokhu kufanele sifunde ukuthi uhlelo lwewebhu lusebenza kanjani kusiphequluli sethu. Lokhu ngeke kube ngumsebenzi olula, ngoba kungenzeka kakhulu ukuthi ikhodi yohlelo lokusebenza itholwe. Lesi sixazululo sisuselwa ekuguquleni ukusebenza kwewebhu okusebenzisa uhlelo lokukhangisa (maqondana nohlangothi lweklayenti). Ngalesi sixazululo, sizobe sivimbele ukukhangisa futhi sayithola insiza, kodwa ngendlela yezandla. Uma ufuna ukwenza inqubo isebenze ngokuzenzakalela, singalungiselela iseva elibambayo elibhekele ukuguqula impendulo ye-HTTP yethu (i-privoxy ngokwesibonelo).
Isixazululo esingahle sikufanele ukucatshangelwa uma uneseva ye-HTTP esebenza futhi ungafuni ukufaka ummeleli, ukusebenzisa ukufaka ohlangothini lwekhasimende lohlelo lokukhangisa. Ngibona lesi sixazululo njengesikude kakhulu futhi sithathwa kakhulu, kepha ezimweni ezithile ezingasebenza. Okokuqala sihlela / etc / hosts ukuze isizinda sokukhangisa sikhombe i-ip yangakini. Ngemuva kwalokho silungisa iseva ye-HTTP ukuze iqondise kabusha zonke izicelo ezimayelana naleso sizinda kokuqukethwe okufanayo. Lokhu okuqukethwe kufanele kusebenzise umqondo owenziwe lula wohlelo lokukhangisa, ngokombono wenqubo evumela ukubonwa okulungile. Njengasesixazululweni sangaphambilini, kuzofanele wenze ucwaningo lwewebhu, uhlelo lokukhangisa nokuxhumana phakathi kwabo. Kungenzeka ukuthi zombili lezi zinhlelo zixhumane ohlangothini lweklayenti zisebenzisa amasu we-crossdomine lapho kuzodingeka sithuthele kunguqulo yasendaweni.
Njengoba kungabonakala, ubunzima kanye nendlela izixazululo ezimbili zokugcina ezisetshenziswa ngayo kuncike kakhulu ezinhlelweni ezithile ezithintekayo. Njengoba ngishilo ngaphambili, uhlelo lokusebenza ngalunye lwewebhu ngumhlaba. Kubalulekile ukutadisha nokuhlaziya amasistimu usebenzisa amasu afana nemikhondo yokwenza, ukubuyisela emuva ubunjiniyela ...
Izixazululo ezimbili zokugcina eziphakanyiswe lapha zilandela ukucabanga kokuthi ukuxhumana phakathi kohlelo lokusebenza lwewebhu kanye nohlelo lokukhangisa kuyenziwa kwiklayenti. Uma inqubo isuselwa ohlotsheni oluthile lokuxhumana phakathi kwamaseva, kufanele kuthathwe indlela ehlukile.
Lokhu kungikhumbuza ngecala elithile elingehlelayo kukhompyutha engilisebenzisa kusuka kumlamuli (ngezinsizakusebenza ezilinganiselwe kakhulu). Lapho ngithola iwebhusayithi ethile, yenza into efanayo nesimo osiphakamisayo: njengoba ngivimbele isizinda sokukhangisa, nginebhokisi elimhlophe ngaphezulu kokuqukethwe engifuna ukukubuka, futhi lokhu ngeke kususwe ngokusebenza okwenziwe kuwebhu bese-ke kuyadingeka ukuthi ukukhangisa kulayishwe. Njengoba umshini unezinsizakusebenza ezilinganiselwe kakhulu ukuze izinqubo eziningi zisebenze, angifinyeleli kuwebhu okukhulunywa ngayo kaningi futhi angifuni nakancane ukuyifaka enkingeni, ngikhethe inketho yokuguqula i-DOM ngesandla lapho ngifuna ukubuka it.
Impela kunezixazululo eziningi, kungenzeka ukuthi eyodwa iguqulwe kangcono noma ibe lula, kepha ngiyethemba ukuthi lokhu kuyakusiza.
Ngithole neziza lapho kuvela khona ibhokisi elingenalutho kokuqukethwe noma ezikhaleni ezingenalutho (lapho ukukhangisa kuvamise ukuya khona) kepha lapho ngibona kunesidingo sokuzifihla ngisebenzisa Element Efihla Umsizi yeFirefox (angazi ukuthi ngabe kukhona okufana nalokhu kwezinye iziphequluli, ngaphandle kwalokho kuyadingeka ukubuza ngakho Abakhethi be-CSS3 futhi wenze izihlungi ngesandla).
Cristian, uma usho ukuthi uma uvula ikhasi elithile uthola okuthile okufana nokuthi "Yenza kungasebenzi i-Adblock ukubona leli sayithi" noma into efana naleyo, lapho-ke Umbulali we-Anti-Adblocker (idinga I-Greasemonkey to work) okususa ukuvikela okuningi okusetshenziswa amanye amasayithi akuphoqa ukuthi ukhubaze i-ad blocker (bengingazi ukuthi lolu hlobo lokuvikela luzosebenza noma ngokuvimba isizinda sefayela le-Host).
Ifayela, bengilisebenzisa isikhashana.
Kepha into ethakazelisa kakhulu incazelo yokuthi wonke umbhalo usebenza kanjani
Isifundo sabanumzane abamsulwa singaheha
Ngikubonile okuthunyelwe okuningana lapha esihlokweni, kepha lapha, ngalesi sibonelo, nami ngigcwalisa okuthile.
Ngizokwenzela i-bat amawindi: fsjal
hooo kuhle kakhulu, iqiniso liyaziswa
anderson freitas kusho
Kuvunyelwe !!!!: O)
Phendula ku-anderson freitas
Kuhle, ngiyabonga ngale minikelo emihle kakhulu ...
iskripthi asinikezi izinkinga nge-ufw?
Uxolo ngokuqina, kepha bengizobeka iskripthi ngale ndlela (okungukuthi, ngalezi zinguquko):
uma [$? -ne 0]; lapho-ke
i-echo "127.0.0.1 localhost.localdomain localhost"> / etc / hosts
i-echo ":: 1 localhost.localdomain localhost" >> / etc / hosts
ikati /etc/hosts.old >> / tmp / hosts-blacklist
ikati /tmp/hosts-blacklist.txt|uniuni >> / etc / hosts
Abanye bethu banezisetho ezithile kubaphathi ezithi ngombhalo ozolahleka, ungilungise uma nginephutha, ngilele huh
Cha, ngiyabonga kakhulu ngegalelo lakho 🙂
Sawubona KZKG ^ Gaara!
Ngisebenzisa i-manjaro nge-kde ne-firefox.
Iqiniso ukuthi umbhalo ulusizo kakhulu kimi.
Ngiqondile ukuthi iskripthi sisebenza kanjani (umyalo ngamunye okuso), kepha okungacaci kimi ...
1) njengoba yenza okufanayo ngokwesibonelo, lapho uvula ividiyo ku-YouTube engalayishi ukukhangisa
2) i-database ivuselelwa kangaki, ingabe iyisibuyekezo sansuku zonke? uma kunjalo, ngithanda ukuvuselela i-database ku-cron nsuku zonke hhayi njalo ngenyanga.
3) iphuzu 3 .. Manje kufanele baqale kabusha i-cron daemon yabo, njengoba i-daemon iqale kabusha, bekungaba yini umyalo wokuyisebenzisa
4) Uma ngiqala kabusha incwadi yokubhalela, kufanele ngiphinde ngisebenzise iskripthi noma ukwenziwa kwayo ukuvuselela i-database kuphela, okungukuthi, okokuqala ngikhipha iskripthi, ukuvinjelwa kwamakhasi kuhlala kuze kube phakade.
ngiyaxolisa ngemibuzo eminingi kodwa yonke imibhalo yenu ihle kakhulu futhi ngifunda nsuku zonke nekhasi lakho.
ngiyabonga. ukuqabula. romi
1) Uma uvula ividiyo ye-YouTube, kwikhodi yekhasi (HTML) yikhodi yokubonisa ividiyo, i-css, njll. Kukhona futhi isikhala (i-div) lapho kubekwa khona ukukhangisa kwe-Adsense (Google), kepha lokho kukhangisa AKUKHO esizindeni se-youtube.com, kuse (isibonelo) ads.adsense.com noma okufana nalokho. Leso sizinda (ads.adsense.com) ukukhangisa okungu-100%, ngakho-ke ngeke nje ulayishe noma yini kuso. Ngakho-ke akunandaba ukuthi uya kumasayithi angama-30, uma nje ekhipha isikhangiso saleso sizinda, ngeke sivele kuwe.
2) Ngokwethembeka angazi, ngifaka i-crontab ukuvuselela iskripthi DB kanye ngenyanga, kepha angazi noma ngabe ukubuyekeza kwe-host.txt kuvame kakhulu noma cha.
3) Yebo, ngithe mayelana nokuqalisa kabusha ikhompyutha (eqala kabusha zonke izinsiza ngokusobala) ukuze ingabi nzima ngokwengeziwe. Ngokunjalo, i-sudo service cron kufanele ikusebenzele uma usebenzisa iDebian, Ubuntu noma iMint. Uma usebenzisa enye into nge-systemd (i-Arch, i-Chakra, ungaqiniseki ukuthi ne-Manjaro nayo) kuzoba yi-Sudo systemctl restart cronie
4) Lapho uhlela / etc / crontab kufanele uvumele ikhompyutha yazi ukuthi leli fayela liguqukile, ukuthi ulishintshile nokuthi kumele liphinde lifundwe futhi ukuze licabangele ushintsho. Ukuze afunde kabusha ifayela, uqala kabusha i-cron noma uqale kabusha i-PC. Manje, lapho uqala kabusha i-PC, iskripthi ngeke sizisebenze ngokuzenzakalela, sisebenza ngosuku oyitshela ngalo ku- / etc / crontab. Futhi yebo, okokuqala usebenzisa iskripthi uma konke kusebenze kahle (ungabheka nge: cat / etc / hosts) Uzobe usuvele ukhangisiwe uvinjelwe.
Ungakhathazeki ngemibuzo, ngiyajabula ukukusiza.
ngiyabonga kzkg !!
kucace akunakwenzeka !!
I-Marcelo (N3krodamus) kusho
Umbhalo muhle, kepha une-typo. Esikhundleni se-o (usonhlamvukazi) kufanele kube u-O (uhlamvu noma usonhlamvukazi) ngoba uma kungenjalo okulondolozwayo yilogi lokuxhumeka kufayela /tmp/hosts.txt
Phendula uMarcelo (N3krodamus)
Ngiyabonga ukucaciselwa, sengivele ngiyakulungisa.
Amazwana amabili apholile:
- Yeka indlela exakile yokuqinisekisa ukuthi ifayela likhona, ndoda!… Uzamile ukusebenzisa if [-f $ file] esikhundleni salokho ls okuthumela okukhiphayo ku / dev / null bese uzokuqinisekisa ukuthi iyi-errorLevel futhi uyakwenza amathanga amaningi kangaka?
- Ngakolunye uhlangothi ... qaphela i -o (izinhlamvu ezincane) ku-wget ... Lokho AKUKWENZI lokho ofuna ukukwenza. Zama -O (osonhlamvukazi)
Isincomo esisodwa: hlola imibhalo ngaphambi kokushicilela
Ungabeka umbhalo ophelele ngokulungiswa kwakho ukuze sikuhlole.
Kulungile, ngingahlola futhi nge-test ... ngikhohliwe lezi zinto lapho ngenza iskripthi ^ - ^
Kungani uhlela ifayela le- / etc / hosts? Ngabe i-DROP nge-iptables ibingasizakala kakhulu futhi ilunge kakhulu?
Kungenzeka, kepha kungaba yingozi impela. Lo mbhalo ulayisha imithetho kusuka kusayithi lomuntu wesithathu, njenge-adblock kepha enamandla amakhulu. Uma sivumela lowo muntu wesithathu ukuthi enze futhi akopishe imithetho ye-iptables ohlelweni lwethu, ungacabanga izingozi zokuphepha ezizodala. Ngaphandle kwalokho, abanye basebenzisa i-gufw, i-firestarter, njll, bangasebenzisa ukumisa kwabo futhi basuse okwethu.
I-KZKG ^ Gaara: Ngiyabonga ngemininingwane, angikaze ngikhathazeke ngempela ngalesi sici, kepha iyangifanela.
pablo @ fausto ~ / Software / Imibhalo% wget http://ftp.desdelinux.net/anti-ads.sh
Iyaxazulula http://ftp.desdelinux.net (ftp.fromlinux.net)… yehlulekile: Igama noma isevisi engaziwa.
wget: ayikwazanga ukuxazulula ikheli lomsingathi "ftp.fromlinux.net"
izinkinga ku-dns, kufanele ube nalokhu okukhiphayo: wget http://ftp.desdelinux.net/anti-ads.sh –13: 34: 11– http://ftp.desdelinux.net/anti-ads.sh => `anti-ads.sh '
Ukuxazulula http://ftp.desdelinux.net... 69.61.93.35
Ixhuma ku http://ftp.desdelinux.net[69.61.93.35]:80... kuxhunyiwe.
Ngemuva kokufunda ukungena kwebhulogi, ngaba nentshisekelo kule ndaba futhi ngathola uhlelo lokusebenza oluphelele kakhulu lwale nhloso olukuvumela ukuthi ungeze uhlu oluningi ngasikhathi sinye ne-GUI yalabo abathanda lokhu kulula ...
Ngabe othile angafaka okuqukethwe koqobo kwefayela /etc/host.old
Ungaba nomusa ongichazelayo ukuthi ngikuqeda kanjani lokhu okuvela kukhonsoli, noma nini lapho ngiyivula, ngine-Arch. Linux bits ezingama-32 ezine-Kde:
memezela -x COLORTERM = »i-gnome-terminal»
Memezela -x DESKTOP_SESSION = »Indawo Yokusebenzela ye-Plasma»
memezela -x BONISA = »: 0 ″
memezela -x GPG_AGENT_INFO = »/ home / javier / .gnupg / S.gpg-agent: 18358: 1 ″
memezela -x GS_LIB = »/ ikhaya / javier / .fonts»
memezela -x GTK_MODULES = »canberra-gtk-module»
memezela -x GTK_RC_FILES = »/ etc / gtk / gtkrc: /home/javier/.gtkrc: /home/javier/.kde4/share/config/gtkrc»
memezela -x IKHAYA = »/ ikhaya / i-javier»
memezela -x KDE_FULL_SESSION = »kuyiqiniso»
memezela -x KDE_MULTIHEAD = »amanga»
memezela -x KDE_SESSION_UID = »1000 ″
memezela -x KDE_SESSION_VERSION = »4 ″
memezela -x LANG = »en_AR.UTF-8 ″
memezela -x LOGNAME = »javier»
memezela -x MAIL = »/ var / spool / mail / javier»
memezela -x MOZ_PLUGIN_PATH = »/ usr / lib / mozilla / plugins»
memezela -x OLDPWD
memezela -x PATH = »/ usr / local / sbin: / usr / local / bin: / usr / bin: / usr / bin / site_perl: / usr / bin / vendor_perl: / usr / bin / core_perl»
memezela -x PWD = »/ ikhaya / i-javier»
memezela -x QT_PLUGIN_PATH = »/ ikhaya / javier / .kde4 / lib / kde4 / plugins /: / usr / lib / kde4 / plugins /»
Memezela -x SESSION_MANAGER = »kwasendaweni / thebest: @ / tmp / .ICE-unix / 18390, unix / thebest: /tmp/.ICE-unix/18390 ″
memezela -x SHELL = »/ bin / bash»
memezela -x SHLVL = »2 ″
memezela -x SSH_ASKPASS = »/ usr / lib / seahorse / seahorse-ssh-askpass»
memezela -x TERM = »xterm»
memezela -x USER = »javier»
memezela -x VTE_VERSION = »3603 ″
memezela -x WINDOWID = »85983238 ″
memezela -x XAUTHORITY = »/ ikhaya / javier / .Xauthority»
memezela -x XCURSOR_SIZE = »0 ″
memezela -x XCURSOR_THEME = »KDE_Classic»
memezela -x XDG_CURRENT_DESKTOP = »KDE»
memezela -x XDG_DATA_DIRS = »/ usr / share: / usr / share: / usr / local / share»
memezela -x XDG_RUNTIME_DIR = »/ run / user / 1000
memezela -x XDG_SEAT = »isihlalo0 ″
memezela -x XDG_SESSION_ID = »c2 ″
memezela -x XDG_VTNR = »1 ″
Angazi ukuthi yini enye okufanele ngiyenze futhi kuyacasula kakhulu ...
Nginxusa isipiliyoni sakho!
Ngiyabonga kakhulu nemikhonzo.-
felix cabrera kusho
Ngisusa kanjani izikhangiso esizeni »Haha»
Ngaphambi kokuthi ufake inombolo ukuthi uyisuse futhi yilokho kuphela
manje akwenzeki lutho
Phendula u-felix cabrera
Sawubona, ngiwumsebenzisi cishe we-novice debian, ngizamile iskripthi futhi sisebenza ngaphezu kwalokho ebengingathanda, ake ngichaze, lapho ngikuhlola, angiboni ngokuya ngamawebhusayithi, kuwebhusayithi yephephandaba ngibona isihloko kuphela ikhava, akukho ukuphawula kwezindaba, futhi kule bhulogi kwenzeka into efanayo kimi, angiboni lutho ngaphandle kwalokho okungena emabhokisini, futhi angiboni nendatshana noma imibono, konke lokhu kuvela ku-firefox okuyiyona isiphequluli engisisebenzisayo, ngingalulungisa kanjani ushintsho kulo mbhalo? Sengivele ngiyisusile ku-cron, kepha "imiphumela" ihlala ikhona, ngiyabonga kakhulu.
Iyatholakala I-Original Hacker # 4